ပင်မစာမျက်နှာ > Facebook Page Tab Feature
Menu Social Networks ဆိုသည်မှာ DIY Website ကို အသုံးပြုသူများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံရေး၊ အချက်အလက်များ ကို အခြား Social Network Website များတွင်လည်း ဖော်ပြနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အခု လက်ရှိ Social Network ကို Website တော်တော် များများ အသုံးပြုလာကြပါသည်။ ဥပမာ - Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest.
သင်ကိုယ်တိုင် Social Network Button ကို တစ်ခြား ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Website တွေပေါ်မှာလည်း Status အနေဖြင့် တင်လို့ပါတယ် ။ Website ကိုလည်ပတ် သူတွေ အနေဖြင့် "Like", "Tweet", "share our product တို့ကို နှိပ်နိုင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အခြားသူငယ်ချင်းများထံ တိုက်ရိုက် ပို့ပေးလို့ ရပါတယ်။
Social Network Setting ကို ဘယ်လို ချိန်ရလဲဆိုတော့ " Setting -> Social Netwoks" သို့ဝင်ရောက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
2. Facebook Pages Tab
VelaEasy Shop XL package ကို အသုံးပြုနေတဲ့ မည်သည့် Customer မဆို Facebook နှင့် Link ချိတ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ အချက်အလက်များ ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား များကို Facebook Page တွင် Facebook Page Tab ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။
ပထမ ဦးဆုံးအနေဖြင့် အချက်အလက် အချို့ကို feature အသုံးမပြုခင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
- သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် "Facebook Page" တစ်ခု ကို ရှိရပါမည်။ ဒါမှ သင့် Webstie နဲ့ ချိတ်ဆက် ပေးနိုင်ပါမည်။ Webmaster နှင့် Facebook Page Admin တို့သာ Facebook Page URL Link ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- အသင့်ပြင် ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အချက်အလက်များကို Facebook Page မှာ ဖော်ပြပေးပါ။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု စီကို Category တစ်ခု ကို ရွေးချယ်ထားရပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေ အတွက် Category ကို ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။
အချက်အလက် အားလုံး ပြင်ဆင်လို့ ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ Facebook Page Tab Feature ကို စတင်လို့ ရပါပြီ။
၁. "Setting" Menu -> "Social Networks" -> "Facebook Page Tab" -> "Enable" ကို အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ရပါမယ်။
ထို့နောက် Facebook Page URL link ထည့်လို့ရမယ့် အကွက်တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ မှာ ဖြည့်ပြီးသွားရင် OK ကို နှိပ်ပေးပါ။
၂. နောက်တစ်ဆင့်တွင် Pop-up Windows တစ်ခု ထပ်မံ ပေါ်လာပြီး Facebook Page မှာ ဖော်ပြမယ့် Menu ကို ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။
Top Menu, Side Menu, Content Library နှင့် Tag List ကို လည်း ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
၃. နောက်တစ်ဆင့် မှာတော့ Facebook Page Tab ကို Facebook Page မှာ ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ Facebook Page ကိုရွေးချယ်ပြီး နောက် "Add Page Tab" ကို နှိပ်ပေးပါ။
၄. ထို့နောက် "Save" ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၅. Facebook Page တွင် သင့်၏ Web onlineshop အတွက် Facebook page tab မှ ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ ဆိုတာ ကို တွေ့ရပါမယ်။
( Facebook Page Tab ခေါင်းစဉ် နာမည်ကို "Web Onlineshop" အပြင် မိမိ နှစ်သက်ရာ နာမည် ပေးလို့ရပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဆိုင် Logo ကို လည်း Upload တင်နိုင်သဖြင့် ပိုမို လူသိများစေပါတယ်။ ( 111 x 74 Pixels တော့ရှိရပါမည်။ ။)
၆. ဘယ်သူမဆို လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး Faceboook ( Web onlineshop ) page ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး Following လုပ်ထားပါက အသစ်တင်သမျှကို မိမိ Wall မှာ ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်း ၏ ဓာတ်ပုံ (သို့မဟုတ်) အချက်အလက် များ ပေါ်ကို Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Website ထဲ သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ Facebook page မှ တစ်ခါတည်း Order မှာယူလို့ ရသဖြင့် ဈေးဝယ်ရ ပိုမို အဆင်ပြေလာပါသည်။ Order မှာထားသည့် ပစ္စည်းများသည်လည်း Website မှာ Shopping Basket မှာ ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၇. "Facebook Page Tab" ကို မသုံးတော့ပါက အောက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၇.၁ ပထမဦးဆုံး "Setting" -> "Social Networks" အောက်မှ "Facebook Page Tab" ကို Cancel နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cancel နှိပ်ပါက အတည်ပြုကြောင်း စာကြောင်းတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ "Ok"ကို နှိပ်၍ Facebook Page Tab ဖျက်သိမ်းခြင်းကို အတည်ပြုကြောင်း လုပ်ပေးရပါမည်။
၇.၂ Pop-up Window တွင် " Confirm the cancellation " လုပ်ဆောင်ချက်ကို "OK" နှိပ်၍ "Save" ကို နှိပ်ပေးပါ။
၇.၃ Facebook Page မှ တစ်ဆင့် Facebook Page Tab ကို ဖျက်ပစ် ရန်တော့လိုပါသည်။ အောက်ပါနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။